IIMPAWU EZIPHAMBILI ZE-GEOMETRIC KUNYE NAMAgama AZO
Las amanani ejiyometriBamele iifom zezinto ezikhoyo kwi-algebraic, inkqubo yemathematics kunye ne-arithmetic, ngazo unokucacisa uyilo, imizobo, amawaka eefom, kuba zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zemigca, esiza kukubonisa zonke iinkcukacha zazo.
1 Amanani ejiyometri
2 Iindidi zamanani ejiyometri
2.2.4 Iikota ezintathu
3 Amanye amanani ejometri
Las amanani ejiyometri Zizonke ezi zigoso zigoso, zaphuliweyo, kunye nemigca exubeneyo ekhonza ukunika imbonakalo yemifanekiso kwizigama zemathematika kunye nee-axioms. Bakwasebenza nezinye izinto ezikhethekileyo ezinceda ukuphucula uyilo, iiprojekthi kunye nayo yonke into enxulumene nokuzoba.
Eyona njongo iphambili yokwazi imilo yejiyometri, ibandakanya ukwazisa kunye nokuvula amandla okujonga abafundi kunye nokwandisa iindawo ezahlukeneyo zokujonga; Oku kuvumela ukuba bandise intsimi yoyilo kwaye bahlule phakathi kokulinganisa, ubuhle kunye nokuphikisana. Xa iimilo zicacisiwe kubalo lwejometri, kunokwenzeka ukuba uqaphele iimpawu ezithile kwiimilo ukusuka kwindawo eyahlukileyo yokujonga.
Yonke into ehambelana nala manani yenziwe ngemigca evaliweyo evulekileyo egobile (iarches kunye nezangqa); Imigca ye-Polygonal (eneenkwenkwezi kunye neepoligoni ezininzi ezixubekileyo), imigca ngokubanzi, efana nokufana, ukujikeleza, ukuxubana, ukwahluka, ukuhlangana, ukudibanisa kunye nokuthambekela.
Inani ngalinye lejiyometri linemigca elawulwayo, emisela umgaqo-siseko wenani lejometri ngokobume bayo. Ke, phakathi kwezinto kunye neemanyano zabo, ii-vertices, ii-angles, ii-arcs kunye namacala ziyafezekiswa, apho nganye nganye kwaye ngokokuma kwayo kwindawo ichonga ubume bomzobo.
Iindidi zamanani ejiyometri
Sizibonile nje izinto zamanani ejiyometri, ngoku siqhubela phambili kwiindidi ezifumaneka kuwo wonke umxholo owenziwayo ekuzoba, izibalo, ubunjineli, uyilo loyilo, ngakumbi kwimathematics. Ngenxa yoko, ukudityaniswa kuyafezekiswa okuvumela ukusekwa amanani ejiyometri anamagama ayintsusa.
Iisetyhula amanani ejiyometri enziwe ngazo zonke ezo fom apho kukho imigca eyahlukileyo egosogoso, nokuba ivaliwe okanye ivuliwe. Phakathi kwabo sinesangqa okanye isangqa, ii-ovals, i-ellipse, i-ovoid, i-arc, igagasi phakathi kwabanye. Ngamnye wenziwe ngobubanzi, irediyasi, i-chord, iziko, kunye ne-tangent.
Ngamanani ejiyometri enziwe kuphela ngemigca ethe tye, phakathi kwawo sinezinto ezinje ngesiqhelo, ezingaqhelekanga, iiparalelogram kunye nee-quadrilaterals, kodwa ngokwahluka okuthile kuzo nganye, makhe sibone ukuba ziyintoni na.
Ziipoligoni apho umgca ngamnye kunye nekona ifanayo, zimiselwe ngamanani alinganayo kwaye zenziwe ngokuqala kwisangqa okanye isazinge, zichongiwe ngokwenani lamacala okanye iiengile, phakathi kwezona zibalulekileyo esinazo:
Unxantathu onamacala amathathu alinganayo kule meko sifumana unxantathu olinganayo.
Isikwere sinamacala amane.
IPentagon enamacala amahlanu alinganayo.
I-Hexagon enamacala amathandathu alinganayo.
IHeptagon enamacala asixhenxe alinganayo.
I-Octagonal enamacala asibhozo.
Enegon amacala asithoba.
I-Decagon enamacala alinganayo alishumi.
I-Endecagon enamacala alishumi elinanye alinganayo.
Njengalezo zangaphambili, zenziwe ngemigca, ii-engile kunye namacala, kodwa kule meko sinezinto zokuba amaxabiso awalingani, kwaye akanamacala alinganayo, singazichaza ngolu hlobo lulandelayo:
Unxantathu weScalne apho onke amacala ayo kunye neeengile zahlukile.
Unxantathu weIsosceles, unamacala amabini alinganayo kunye namacala kunye nelinye elahlukileyo.
I-trapezoids kunye ne-trapezoids enamacala ahluke ngokupheleleyo kunye nee-engile.
Uxande lunamacala amabini angalinganiyo kunye namacala.
Bangamanani ejiyometri anemigca emibini, imigca emibini engqinelanayo. La manani athathelwa ingqalelo rhoqo okanye rhoqo iipoligoni, ngenxa yoko ziwela kumaqela amabini; Makhe sibone ukuba zintoni: isikwere, uxande, irhombus, irhomboid kunye netrapezoid.
Ngamanani e-arithmetic aqukethe amacala amane kuphela nokuba ahambelana ngokuthe rhoqo okanye amacala afanayo kunye neeengile. Phakathi kwezona zibaluleke kakhulu esinazo, irhombus, isikwere, uxande, i-trapezoid, i-trapezoid kunye ne-rhomboid.
Ngawo la manani apho imigca eyaphukileyo nethe nkqo idityanisiweyo idityanisiwe, kunye namanani ejiyometri athi kamva abumbe uhlobo lomzobo, umzekelo, singakhankanya umanyano loonxantathu ababini abalinganayo abenza ukuqhekeka kwamanqaku amathandathu, kunye nokudibana kwamabini. Iifom zesikwere ezifakwe ngaphakathi ziinkwenkwezi ezisixhenxe.
Inani ngalinye lejiyometri linendawo kunye nomjikelezo, apho eyokuqala ibalwa ngokuphindaphinda amacala ayo kunye nokufumana ixabiso eliphindwe kabini. Ngokumalunga nomjikelezo, kulula ukubala, kuphela ubude bemigca yabo bulinganisiwe kwaye umphumo uvumela ukunika ixabiso lilonke.
Ukubalwa kwendawo kumiselwa ziifomyula ezahlukeneyo, umzekelo kwisikwere kulula kuba onke amacala ayalingana kwaye ii-angles zenza i-engile elungileyo; Ke ngoko, ifomula A = L x 2 iyasebenza, okanye ifomula ngokubanzi A = bxh, apho "b" sisiseko kwaye "h" ukuphakama.
Ngokumalunga nenkqubo yokubala indawo yamanye amanani ejiyometri, iinkqubo kunye izahlulo eyahlukileyo, nokuba ixabiso «pi» liyathathwa ukumisela indawo yesangqa, kodwa ayisetyenziselwa ukumisela indawo yamanye amanani.
Amanye amanani ejometri
Kukwakho namanani ejiyometri angacaba, anomnye umlinganiso. Ngokuqinisekileyo, ukuza kuthi ga ngoku sele siwabonile onke amanani ejometri anesiseko kunye nokuphakama; Ezi zinto zimbini ziyimilinganiselo esisiseko yayo nayiphi na into, kodwa xa ubunzulu bongezwa kuyo, emva koko sifumana amanani anobukhulu obuthathu.
Kule meko, amanani anje ngetyhubhu, unxantathu, ikhowuni, ingqokelela, isilinda, iphaneli, iphindwe kabini, iiherism ezinamacala amathandathu. Nganye yazo inemilinganiselo eyaziwayo, isiseko kunye nokuphakama, (ekwabizwa ngokuba kukuphakama nobubanzi) kodwa ikwaqulathe ubunzulu okanye ubukhulu.
La manani asivumela ukuba sixabise ezinye iimilo zejiyometri ezinxulunyaniswe nezinto eziyinyani. Inobume apho ubuso obuninzi bunokujongwa khona, njengomzekelo sinetyhubhu, emisela ubuso obathandathu obungenakubonwa bonke ngaxeshanye, enyanisweni, akukho mzobo-ntathu unalo mgangatho.
Ngaba unomdla? Ukuba ungathanda ukufunda ngeminye imixholo efana nale, siyakumema ukuba ubone inqaku elilandelayo Iifomula zeMathematika zeZikolo eziPhakamileyo